မနှစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာ မှ အစီးရေ ၃ စီးပဲ ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ Ford Mustang Mach-E ! – MyMedia Myanmar
မနှစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာ မှ အစီးရေ ၃ စီးပဲ ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ Ford Mustang Mach-E !
Mustang Mach-E ဆိုတဲ့ အမျိုးအစား ကတော့ Ford ရဲ့ ၂၁ ရာစုနှစ် အတွင်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှ ကားတွေ ထဲမှာ တစ်မူထူးခြားပြီး ကွဲပြား နေတယ်လို့ ဆိုလို့ရတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကားနဲ့ ပက်သက်လို့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ စွမ်းအင် လည်ပတ်မှုတို့ အကြားမှာ ထိန်းထားနိုင်တာကို ချီးကျူးရမှာပါ။ အမေရိကကို ပထမဆုံးတင်ပို့တာ ကတော့ မနှစ်ကမှ စတင်တာ ဖြစ်ပြီး အော်ဒါ တွေ အများ အပြား ကို လက်ခံ ရရှိခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် တမ်း ၂၀၂၀ မှာ ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ ကား အရေ အတွက်ကို သိရရင်တော့ အံ့အား သင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ အနေအထား ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ထက် အစီးရေ ၃ စီးသာ ပိုပြီး ရောင်းချ ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒီ အချက်အ လက် တွေ က နည်းနည်းတော့ လှည့်စားနေသယောင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ မထွက်ရှိခင်တုန်း က ကြိုတင် ရောင်းချခဲ့ရတာမျိုး မရှိတာကြောင့် စုစုပေါင်းမှ ၃ စီးပဲ ရောင်းချ ရတယ် လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ။
ထုတ်လုပ်ရေး အပိုင်းတွေ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ ကမှ စတင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၉ စီးပဲ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မတ်လ မှာ တော့ ပိုပြီးတိုးတက် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကာ အစီးရေ ၉၇ စီး အထိ ရှိခဲ့ပေမယ့် ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ဝင်ရောက်လာခဲ့ ပြီးတဲ့ နောက်မှာ တော့ ဧပြီလမှာ ၁၇ စီးပဲ ထုတ်လုပ် နိုင်တော့တဲ့ အထိလျော့ကျသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု အနေအထားက အခြားသော ကားထုတ် လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေလည်း အလားတူ ကြုံတွေ့နေကြရတာ ဖြစ်တာကြောင့် Ford အတွက် သိပ်ပြီး အဆန်းတော့ ဖြစ်မနေပါဘူး။ မေ ၊ ဇွန် နဲ့ ဇူလိုင် လ တို့မှာ Ford အနေနဲ့ ၁၆ စီး ၊ ၆ စီးနဲ့ ၁၂ စီးတို့ ဆက်လက်ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဩဂုတ်လမှာတော့ ထုတ်လုပ်ရေး တွေ ပြန်လည် လည်ပတ် လာခဲ့ပြီး အစီးရေ ၁၂၆ စီး အထိ တိုးတက် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလမှာ တော့ အစီးရေ ၂၄ စီး ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ ခဲ့ပေမယ့် အောက်တိုဘာ လ မှာတော့ စံချိန်တင် မြင့်တက်အောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ ကာ ၇၃၆ စီး အထိ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် တိုးတက်မှု အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာ လ မှာ အစီးရေ ၂,၅၄၅ အထိတိုးတက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ လမှာတော့ ပို ကောင်းတဲ့ ပမာဏ ဖြစ်တဲ့ ၃,၁၂၉ အထိ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး အနေနဲ့တော့ ၆,၇၁၇ အထိ ထုတ် လုပ် နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အခြေအနေ ကို ကြည့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် အရေ အတွက် အလုံ အလောက် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလို့ ရတာ ကြောင့် လမ်း‌မတွေထက်မှာ Mach-E ကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည် မြင်တွေ့ လာရတော့မယ့် အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လို ထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် ကတော့ အဆိုပါနှစ် အတွက် ကို ၂,၀၃၄,၈၀၇ အထိ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အများ စုကတော့ Ford ရဲ့ အကောင်း ဆုံး ကား တစ်စီး အဖြစ် လူကြိုက်များနေဆဲ F-150 က အဓိက ကျခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ မှာ တော့ F-Series အစီးရေ ပေါင်း ၇၈၇,၄၂၂ လောက် အထိ ရှိထားကာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ အတွင်း အစီးရေ ၂၀၀,၀၀၀ နီးပါးရောင်းချ ခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဆက် လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ကတော့ ကားတိုင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ရောင်းအားအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကတော့ အရမ်းကြီး ဂရုစိုက် နေရမယ့် အနေအထား တစ်ရပ်မှာ ရှိမနေတော့ပဲ Brand အကုန်လုံး ရဲ့ ရောင်းအားနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု တွေ အရတော့ အတက် ဘက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အတွင်း Mach-E ရောင်းချရမှု ၃ စီးပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာ တော့ Dealer တွေထံမှာ အစီးရေ ထောင်ချီရှိနေတာကြောင့် အခြေအနေ ကောင်း နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post မနှစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာ မှ အစီးရေ ၃ စီးပဲ ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ Ford Mustang Mach-E ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-10T18:31:41+06:30January 10th, 2021|MYCARS MYANMAR|